होटलमा भाडा माझ्दै सडकमै सुतेर रात बिताए ! गायक बन्ने सपना पुरा हुँदै (हेर्नुस् भिडियो)
हामी सबैले जीवन निर्वाह गर्नको लागि केही न केही काम गरिरहेका हुन्छौं । कति रहर त कति वाध्यताले आफ्नो सुन्दर भविष्यको खोजीमा काठमाडौंलाई नै गन्तव्य बनाउँदै आएका छन् । सबैको सपना कहाँ साकार हुन्छ र ? सपना साकार बनाउनेहरु महलमा हुन्छन त हारेकाहरु सडकमा नै संघर्ष गर्न विवश छन् । महलमा बस्नेहरु त आफ्नो जीवन सजिलै चलाउंछन् तर सडक पेटीमा बस्ने अनि एक छाक टार्न संघर्ष गर्नेको जीवन कति पिडादाई हुन्छ होला ? एकपटक आफैलाई त्यो ठाउँमा राखेर हेर्दा पनि मन नै छिया छिया भएर आउँछ ।
फोहोर र प्लास्टिक च्यापेर पापी पेट पाल्न दु:ख गर्दै गल्लि गल्लिमा भौतारि हिड्नेको जिन्दगि पनि कम पीडादायक छैन । यस्तै जिन्दगि व्यतित गर्दै आएका समाजका एक पत्र हुन्, बलराम परियार । सडकमा फोहोर र प्लास्टिक टिप्दै, भिख माग्ने सम्म काम गरेका बलराम अहिले एउटा होटलमा भाँडा माझ्ने काम गरिरहेका छन् । टिकापुर कैलाली घर भएका बलराम पढ्नको लागि काठमाडौँ आएका थिए तर उनको त्यो सपना काठमाडौँमा आएपछि तुहियो ।
होटलमा काम गर्न थालेपछि अहिले उनको जीवन परिवर्तन भएको छ । सडकको त्यो बास अनि भिख मागेर खानु पर्दा निकै रुने गर्थे बलराम । दु:ख र संगर्ष नै जीवनको पाटो हो भन्ने स्वीकारेका बलराम मिठो स्वरका धनि पनि हुन् । निकै मिठो गीत गाउछन् उनी । भौतिक सम्पति नभएपनि उनको एक मात्र सम्पति भनेको उनको गला हो । उनको गलामा सरस्वतिको बास छ । साहुले बाबु सरह व्यवहार गर्छन उनलाई । आज हामी यिनै बलरामसँगको कुराकानी तपाईहरु माझ राख्दै छौँ । पुरा भिडियो हेरेर शक्दो शेयर गरि प्रतिभावान बलरामलाई साथ सहयोग गर्नुहोला ।